ဆရာမလေးစိမ်းလဲ့ညို – Grab Love Story
ရှမ်းပြည်နယ်က တောရွာလေးတရွာသို့ ကိုယ်တတ်ထားတဲ့ဆေးပညာနဲ့ပရဟိတအဖြစ်ဆေးကုပေးရန်ရောက်လာခဲ့သည်မှာတစ်လပြည့်ခဲ့လေပြီ
တောင်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့တောသူတောင်သားတွေက ဖော်ရွေစွာကြိုဆိုကြတော့ အလုပ်မှာပိုစိတ်အားတက်ကြွနေမိတာအမှန်ပါ
သက်ငြိမ်ကလူပျိုလူလွတ်ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရုပ်ရည်ချောမောရုံသာမက ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်သည်
သူပရဟိတလုပ်တဲ့ဆေးခန်းမှာ နေဇော်ဆိုတဲ့ကျန်းမာရေးမှူးတယောက်နဲ့ အသက်၂၃နှစ်ဝန်းကျင်နပ်စ်မလေးတယောက်ပါအရင်ကတည်းကဆေးခန်းမှာအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပြီး ထူးခြားတာက နပ်စ်မလေးခင်နှင်းကရုပ်ရည်ချောမောပြီး လုံးကြီးပေါက်လှဖြစ်သည် ဒါကိုသက်ငြိမ်တယောက်ဒီရွာကိုရောက်စကတည်းက သတိထားမိတာ နပ်စ်မလေးရဲ့အကြည့်စူးစူးနဲ့ ဖော်ရွေတဲ့ပြုံးဟန်လေးကလည်း သက်ငြိမ်ကိုရင်ခုန်စေသလို ရင်တုန်စေသလိုပါဘဲ
အဲ့ဒီပျဉ်ထောင်သွပ်မိုးအိမ်အပေါ်ထပ်မှာဘဲ ကိုယ်ကတခန်း ကျန်းမာရေးမှူးကိုနေဇော်ကတခန်းနေတယ်
အောက်ထပ်မှာတော့ နပ်စ်မလေးသက်နှင်းနဲ့အတူ ဒီရွာစာသင်ကျောင်းမှာ တာဝန်ကျတဲ့
မူလတန်းပြဆရာမလေး စိမ်းလဲ့ညိုတို့နေကြတာ ကျောင်းဆရာမလေးစိမ်းလဲ့ညိုဟာလည်း နပ်စ်မလေးလောက်ရုပ်လှတာကို မမှီပေမယ့် ကိုယ်လုံးတောင့်တင်းတာတော့ နင်လားငါလားပေါ့ ရင်သားတွေကလည်း ယူနီဖောင်းအင်္ကျီအဖြူရင်ဖုံးလေးအောက်မှာ ငွားငွားစွင့်လို့ တင်သားစိုင်တွေဆို လုံချည်အစိမ်းအောက်မှာ လမ်းလျှောက်တိုင်းလှုပ်လီလှုပ်လဲ့နဲ့ မဟာဆန်သူလေ
ဆေးခန်းက သူတို့တည်းခိုတဲ့ခြံဝန်းထဲမှာဆိုတော့ ဆေးခန်းလာပြတဲ့လူနာမရှိရင် သက်ငြိမ်တယောက်အိပ်ခန်းထဲမှာ စာဖတ်နေတတ်တာ
ကျန်းမာရေးမှူးနဲ့နပ်စ်မလေးကတော့ဆေးခန်းထိုင်ပေါ့ ဒီနေ့ ကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုတော့ ကျောင်းဆရာမလေးစိမ်းလဲ့ညိုလည်းနားရက်ရလို့အဝတ်လျှော်နေတယ်ထင်တယ် အောက်ဖက်မှာ ရေသံတွေကြားနေရတယ် ရေတွင်းက သက်ငြိမ်နေတဲ့အခန်းရဲ့ခေါင်းရင်းဘက်မှာပေါ့ ရေတွင်းနဲ့ရေချိုးတဲ့နေရာကိုတော့ ဝါးကပ်တွေနဲ့ဝင်ပေါက်တစ်ခုချန်ပြီးပတ်ပတ်လည်ကာထားတာလေ ကျောင်းဆရာမလေးလည်း အဝတ်လျှော်ရေချိုးလုပ်နေတဲ့ပုံဘဲ ရေချိုးဆိုမှမျက်လုံးထဲမှာ ကျောင်းဆရာမလေးကို ရင်လျားရက်နဲ့ရေစိုထဘီနဲ့စိတ်ကူးထဲမြင်မိတော့ သက်ငြိမ်တယောက်တဏှာစိတ်တွေဖြစ်လာမိတယ် ဆရာဝန်ဆိုပေမယ့် ကျောင်းပြီးတာမကြာသေးတော့ အတွေ့အကြုနုနယ်သေးတယ်လေ တက်ကြွဖျတ်တဲ့အရွယ်ဆိုတော့ မျက်လုံးထဲမှာ ဆရာမလေးစိမ်းလဲ့ညိုရဲ့အလှအပကို အပြင်မှာခံစားကြည့်ချင်လာတယ် ရေချိုးချိန်လည်း နီးလာပြီလေ အရင်ကတော့ တယောက်ပြီးမှတယောက်ရေချိုးကြတာများတယ်ရေချိုးဖို့အတွက်က ရေစည်လေးခုလုပ်ပေးထားပြီး မနက်ဆိုသူကြီးအိမ်က အလုပ်သမားတစ်ဦးက ရေဖြည့်ပေးပြီးသားလေ
ကျောင်းဆရာမလေး စိမ်းလဲ့ညိုတယောက် အဝတ်လျှော်အဝတ်လှန်းပြီးလို့ ရေချိုးနေတာ အတော်ကြာနေပြီ ခု ထိ ရင်ဖိုတောင်မနားဖူးသေးတဲ့အပျိုရိုင်းလေးကောလိပ်ကျောင်းသူဘဝတည်းက မိမိကိုပိုးပန်းတဲ့သူတွေအများကြီး ဒါတောင်အကြိုက်မတွေ့လို့ ရည်းစားမရခဲ့ ခုတော့ဆရာဝန်ပေါက်စလေးသက်ငြိမ်ဒီရွာဆေးခန်းကိုရောက်လာတဲ့နေ့ကတည်းက မြင်မြင်ချင်းရင်ခုန်သလိုဖြစ်ခဲ့တာ ဒါကြောင့်တသက်လုံးစောင့်ထိန်းလာတဲ့သိက္ခာနဲ့မာနက အရည်ပျော်ချင်လာပြီလေ ရေချိုးနေရင်းနဲ့စိတ်ကူးထဲမှာ ဆရာဝန်လေးများ သူမရေချိုးနေတာကို အိမ်အပေါ်ထပ်ကချောင်းကြည့်နေမလားလို့ ဘာမဆိုင်စိတ်ရိုင်းတွေ ဝင်မိတာ မိမိကိုယ်ကိုတအံ့တသြဖြစ်မိ ဒါမှမဟုတ်သူမရေချိုးနေတာသိရက်နဲ့ဆရာဝန်လေးများရေချိုးဆင်းလာမလားတွေးရင်ရေချိုးနေလိုက်တာ တစ်နာရီပြည့်တောမယ်လေ ဒါပေမယ့်သူမရဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုကိုထိန်းချုပ်ရင်း ရေစိုထဘီကို လဲဖို့ လုံချည်တထည်ကိုကွင်းလိုက်ခေါင်းပေါ်မှစွပ်ချလိုက်ပြီး အတွင်းကရေစိုထဘီကို ရင်ဘတ်ကနေအတွင်းလက်တဖက်နှုက်ပြီးချွတ်ချလိုက်တယ် ပြီးတော့ရေလဲထဘီကို ရင်လျားဝတ်မလို့ကိုင်ရင်းနောက်အလှည့် ဘယ်အချိန်ကတည်းက
အို အမေ့ ရုတ်တရက်ထိတ်လန့်မှုနဲ့လက်နှစ်ဖက်က ထဘီကို ရင်မလျားမိသေးဘဲ တန်လန်းကြီး ဒါကြောင့် သူမထက်အရပ်ပိုမြင့်တဲ့ဆရာဝန်လေးက မိမိရဲ့ဆူဖြိုးတဲ့ရင်သားနှစ်မွှာကို အပေါ်စီးက အတိုင်းသားမြင်နေရတာ ဆရာဝန်လေးကလည်းရုတ်တရက်သူမရဲ့ဖွံ့ထွားလုံးဝန်းနေတဲ့ရင်သားအစုံကိုမှင်တက်ရင်းကြည့်နေတာ အို ဆရာဝန်လေးကို စိမ်းလဲ့ညိုစိတ်ဝင်စားပေမယ့် အခုလိုတစိမ်းယောင်္ကျားတယောက်ရဲ့ရှေ့မှာမိမိရဲ့အလှကို ပြသ သလိုဖြစ်မိတဲ့အတွက် ကျောင်းဆရာမလေးမျက်နှာမှာ ရှက်သွေးတွေဖြာနေမိ
ဒေါက်တာသက်ငြိမ်တယောက် ရေငတ်တုန်းရေတွင်းထဲကျသလိုဖြစ်မိတဲ့အတွက် စိတ်ထဲကာမစိတ်တွေတက်လာပြီး ပေါင်ကြားထဲကညီတော်မောင်ကပုဆိုးကြားက မာန်တက်ကာခေါင်းထောင်နေတာ ဒါကိုကျောင်းဆရာမလေးစမ်းလဲ့ညိုက အမှတ်မထင်မြင်သွားတော့ အို တရှက်ကနှစ်ရှက်ဖြစ်ပြီးရေစိုထဘီတောင် ပြန်မကောက်တော့ဘဲအိမ်ဖက်ကိုပြေးပါလေရော
ဒေါက်တာသက်ငြိမ် မနက်ဆေးခန်းထိုင်မလို့အိမ်ပေါ်ကအဆင်းကျောင်းဆရာမလေးစိမ်းလဲ့ညိုလည်း အဖြူအစိမ်းဝတ်စုံနဲ့လက်ဆွဲခြင်းလေးဆွဲလို့ နှစ်ဦးမျက်လုံးချင်းအဆုံဆရာမလေးရဲ့ပါးမို့မို့မှာရှက်ေ သွးတွေဖြာနေတာ သက်ငြိမ်တယောက်သတိထားခဲ့မိတယ်ဆရာမကျောင်းသွားတော့မလို့လားနှုတ်ဆက်တော့ ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးရှေ့ကဖြတ်လျှောက်သွားလိုက်တာ
ဒေါက်တာသက်ငြိမ်မျက်လုံးတွေက ဆရာမလေးရဲ့နောက်ပိုင်းအလှကို တဝကြီးရှုစားနေလိုက်တာ ဘေးနားရောက်လာတဲ့နပ်စ်မလေးခင်နှင်းကိုတောင် သတိမထားမိလိုက်တဲ့အဖြစ်
ဟိုင်း မောနင်းဒေါက်တာကြီးဆိုမှ အသိပြန်ဝင်လာတယ် မခို့တရို့ပြုံးပြပြီး နှုတ်ဆက်နေတဲ့နပ်စ်မလေးရဲ့မျက်နှာမှာ ရှင်ကြီးဆရာမလေးရဲ့ဘယ်နေရာကိုလိုက်ငမ်းနေတယ်ဆိုတာကျမသိနေတယ်ဆိုတဲ့အပြုံးမျိုးနဲ့ သက်ငြိမ်လည်းရှက်ကိုးရှက်ကန်းနဲ့ သြော်ဆရာမ ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးမှူးရော ခွင့်ကပြန်မလာသေးဘူးလားလို့မေးတော့ ဟာဒေါက်တာကလည်း သူ့ခွင့်ပြည့်ဖို့ ၃ရက်လိုသေးတယ်လေ သြော် ဟုတ်သားဘဲလို့ဆိုတော့
ဒေါက်တာ ကျမကရော ကြည့်မကောင်းဘူးလားဟု နပ်စ်မလေးက စ သလို နောက်သလိုနှင့်မေးလေသည်
ကဲ ဆရာမရယ် ဆွေးနွေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ဆေးခန်းရောက်မှ ထိုင်ဆွေးနွေးပေတော့ဗျာ ဟုပြောပြီး
ဆေးခန်းဘက်ဦးတည်နေတော့လေသည် ခခ်..ကနဲ ရယ်သံနဲ့အတူ
နပ်စ်မလေး ခင်နှင်းလည်း ဒေါက်တာသက်ငြိမ်နောက်မှ လိုက်ခဲ့လေသည်
အင်း ဒီလိုသန်သန်မာမာ ချောမောတဲ့ဒေါက်တာပေါက်စလေးနဲ့ အတူနေရရင် ဘယ်လိုနေမလဲဟု နပ်စ်မလေးစိတ်ကူးထဲအတွေးဝင်ရင်း လမ်းလျှောက်လာရာ ရှေ့ကရပ်ပြီးဆေးခန်းတံခါးဖွင့်နေတဲ့ ဒေါက်တာသက်ငြိမ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို တည့်တည့်ဝင်တိုက်မိရာ ဟန်ချက်ပျက်သွား၍
ဆရာဝန်လေးမှလှမ်းအဆွဲ** အို….. အင့်** နပ်စ်မလေးမှာကျောပေးလျက် ကုန်းကုန်းကွကွဖြစ်နေတာကို သက်ငြိမ်ကနောက်ကလှမ်းဖက်လိုက်သလိုဖြစိသွားပြီး လက်နှစ်ဖက်က ခင်နှင်းရဲ့ ရင်သားနှစ်မွှာကို ဆုပ်ကိုင်မိသလိုဖြစ်ပြီး တင်ပါးအိအိကြီးတွေက သက်ငြိမ်ရဲ့ ပုဆိုးကြားက
ဖွားဖက်တော်နဲ့ထောက်မိသွားလေသည် နှစ်ဦးစလုံးမှင်တက်မိသွားပြီး ဒေါက်တာရဲ့လွှတ်ပါဦး နောက်ကလည်းဘာကြီးနဲ့ထိထားမှန်းမသိဘူးဆိုမှ သက်ငြိမ်အသိစိတ်ပြန်ဝင်လာပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို
ညဘက်ရေမိုးချိုးထမင်းစားပြီးသက်ငြိမ်တယောက်အိပ်ရာပေါ်တွင် မနက်ကအဖြစ်အပျက်ကို ပြန်တွေးပြီးပြုံးနေလေသည်
ဒေါက်တာ ဒေါက်တာ အိပ်ပြီလားဒေါက်တာဆိုတဲ့ အခန်းအပြင်ကခေါ်နေတဲ့နပ်စ်မလေး ခင်နှင်းအသံကြားတော့ အခန်းတခါးဖွင့်လိုက်ရာ နပ်စ်မလေးခင်နှင်း မျက်နှာချင်းဆိုင် အနီးကပ်ဖြစ်နေတော့ သူမရဲ့သနပ်ခါးရနံ့လေးတွေက သင်းပျံ့နေတော့သည်
မဟုတ်ပါဘူးဒေါက်တာ မနက်ကဆေးခန်းမှာ ဒေါက်တာနဲ့တိုက်မိလို့ လဲမလိုဖြစ်သွားတာ အဲ့ဒီအချိန်ကဘာမှမဖြစ်ပဲ အခုမှ ကျမခါးနာသလိုဖြစ်နေလို့
သြော် ဟုတ်လားဆရာမ ဒါဆိုကျနော် ကြည့်ပေးရမလား
ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာ ဒေါက်တာက အရိုးအကြောလည်းနားလည်တယ်ဆိုတော့ စမ်းသပ်ပေးပါဦး ဒါဆိုကျနော့်အခန်းထဲက ခုတင်ပေါ်ခဏလှဲလိုက်ပါလား စမ်းသပ်ကြည့်မယ် လာဗျာ နပ်စ်မလေးသက်နှင်းလည်း ကုတင်ပေါ်ထိုက်လျက် သက်ငြိမ်ကိုမော့ကြည့်လေသည်
တစိမ်းယောက်ျားတယောက်ရဲ့အိပ်ရာပေါ် နှစ်ဦးတည်းရှိတဲ့အချိန်ဆိုတော့ ရင်တုန်မိသလို
*ဆရာမ မှောက်အိပ်လိုက် ဘယ်နေရာကနာနေလဲ စမ်းကြည့်မယ် ဟူး သက်ငြိမ်မှောက်လှဲလိုက်တဲ့ ခင်နှင်းရဲ့နောက်ပိုင်းကောက်ကြောင်းတွေကြည့်ပြီး စိတ်ထဲမရိုးမရွဖြစ်လာလေသည်
ကျနော်ခါးနေရာတဝိုက်စမ်းကြည့်မယ် နာတဲ့နေရာရောက်ရင်ပြောဆိုတော့ ခင်နှင်းခမျာ ဘယ်နေရာကနာမှန်းမသိတော့ဘဲ ဒေါက်တာရဲ့အထိတွေမှာ မိန်းမောသွားခဲ့လေသည်
ဒါကိုသက်ငြိမ်လည်း နပ်စ်မလေးမျက်လုံးတွေ စင်းနေတာကိုကြည့်ပြီး သဘောပေါက်လေရာ စိတ်ရိုင်းတွေပေါ်ပေါက်လာပြီး လက်ကခါးနေရာမှအပေါ်ဘက်တိုးသွားပြီး နပ်စ်မလေးရဲ့နို့အုံတွေကို ပွတ်ပေးနေမိတော့သည်
ခင်နှင်းရဲ့တိုးညှင်းစွာ ညည်းညူသံကို ကြားရတော့ မနေနိုင်တော့
ခင်နှင်းရဲ့ပုခုံးလေးကိုဆွဲထူလိုက်ရင်းနှုတ်ခမ်းတွေကိုအငမ်းမရနမ်းလိုက်လေသည် နပ်စ်မလေးခင်နှင်းကလည်းမျက်လုံးတွေစင်းနေပြီး သက်ငြိမ်ရဲ့လည်ပင်းကို သိုင်းဖက်ကာ ပြန်နမ်းလေရာ
ဒေါက်တာသက်ငြိမ်တယောက်အရဲစွန့်ပြီးခင်နှင်းရဲ့တီရှပ်အင်္ကျီလေးကို ချွတ်ပေးတော့ အလိုက်သင့်လက်ကလေးမြှောက်ကာကူချွတ်ပေးရင်း ချိုမြိန်တဲ့အနမ်းတွေနဲ့ယစ်မူးနေတော့လေသည်
နောက်တဆင့် ဒေါက်တာသက်ငြိမ်ရဲ့လက်တွေကခင်နှင်းရဲ့ပေါင်ကြားကို ထဘီပျော့ပျော့လေးပေါ်မှ စမ်းနှိုက်လိုက်ရာ နပ်စ်မလေးခင်းနှင်းခမျာ ခါးကော့သွားလေတော့သည်
ဒေါက်တာသက်ငြိမ်လည်း အလိုက်သင့်ဆွဲချွတ်ရင်း ကြည့်လိုက်တော့ မီးအိမ်အလင်းရောင်နဲ့နပ်စ်မလေးရဲ့ ပေါင်ကြားထဲမှ မွေးညှင်းနုနုလေးတွေ ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးက သူ့ကိုစိန်ခေါ်နေသလိုလို
လက်တွေက အလိုလိုခင်နှင်းရဲ့အဖုတ်လေးပေါ်မှာ အထက်အောက်ပွတ်ပေးနေတော့ နပ်စ်မလေးခင်နှင်းခမျာ တိုးညှင်းတဲ့ညည်းသံနဲ့အတူ ခါးတွေပါကော့သွားလေရဲ့ သက်ငြိမ်လည်း စိတ်ကထန်လာပြီမို့ ပုဆိုးကိုဖြည်ချလိုက်ရာ ထောင်မတ်နေတဲ့လီးကြီးက လှုပ်ရမ်းကာမာန်ဖီနေတော့သည် ဒါကိုပွင့်လင်းရဲတင်းလှတဲ့ နပ်စ်မလေးခင်နှင်းကမြင်တော့…… အို ဒေါက်တာ့ဟာကြီးက အကြီးကြီးဘဲ
ခင်နှင်းက ခုချိန်ထိအလိုးမခံဖူးဘူးလား ဟင့်အင်းဒေါက်တာရဲ့ ကျမက ကိုယ့်လက်တွေနဲ့ဘဲ တကိုယ်ရေအာသာဖြေဘူးတာ
ဒါ ပထမဆုံးအကြိမ်အလိုးခံရမှာပဲ ဒေါက်တာ ဖြည်းဖြည်းနော် ဟုတ်ကဲ့ ဆရာမ ကျွန်တော့ ဟာကြီးကို ကိုင်ကြည့်ပါလား ခင်နှင်းလည်း သက်ငြိမ်ရဲ့လီးကြီးကို ကြည့်ရင်းနဲ့ မိမိအဖုတ်မှ အရည်တွေစို့လာလေပြီ
ဒေါက်တာသက်ငြိမ်ရဲ့ ထောင်မတ်နေတဲ့ လိင်တံကြီးကို နပ်စ်မလေးက လက်နဲ့ကိုင်ကြည့်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် ဂွင်းထုပေးနေလေရာ
*** အိုး အားး **ဆိုတဲ့ဖီးအပြည့်နဲ့ သက်ငြိမ်ရဲ့ညည်းညူသံထွက်လာ
စိတ်အရမ်းထန်နေပြီ ဖြစ်ရာ နပ်စ်မလေးကို ချိုင်းနှစ်ဖက်မှ မ ယူပြီး ကုတင်ပေါ် ပက်လက်အနေအထား ထားလိုက်ပြီး မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်း ခင်နှင်းရဲ့ပေါင်ကြားမှာ နေရာယူကာ မျက်နှာချင်းဆိုင် အနမ်းတွေပေးတော့ ခင်နှင်းလက်နှစ်ဖက်က သက်ငြိမ်ရဲ့ကျေုာပြင်ကို ဆွဲဖက်ကာ လုပ်ပါတော့ဟု ပြောနေသလိုလို
ဒေါက်တာသက်ငြိမ်လည်း လက်တစ်ဖက်ကို ထောက်ထားပြီး တဖက်ကမိမိရဲ့လီးကိုကိုင်၍ ခင်နှင်းရဲ့အဖုတ်ဝမှာ တေ့ကာ တဖြည်းဖြည်းချင်း သွင်းလေတော့သည်
အ နာတယ် ဖြည်းဖြည်းလုပ်နော် ဒေါက်တာ
အင်းပါ ခင်နှင်းရဲ့ ခဏနေရင်ကောင်းသွားမှာဟုဆိုကာ
အသွင်းအထုတ် မှန်မှန်လုပ် လိုးပေးနေရာ နပ်စ်မလေးခင်နှင်းခမျာ ဖီးတွေတက်လာပြီး
အား အ အိုး အင့် သက်ငြိမ်လည်း ခင်နှင်းရဲ့နို့အုံတွေကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆုပ်နယ်ရင်း ခပ်မြန်မြန်လေးဆောင့်လိုးပေးနေလေရာ ဒေါက်တာမြန်မြန်လေးဆောင့်ပေး ခင်နှင်းပြီးခါနီးနေပြီ
ဒေါက်တာသက်ငြိမ်လည်း တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လေးရှိတဲ့ နပ်စ်မလေးခင်နှင်းရဲ့အဖုတ်လေးကိုလိုးပေးနေရတော့ နောက်ထပ်အချက်သုံးဆယ်လောက် non stopခပ်ပြင်းပြင်းလေး ဆောင့်လိုးရင်းနဲ့ လရည်တွေထွက်လာကာ ခင်နှင်းရဲ့အဖုတ်လေးထဲ ပန်းထည့်မိလိုက်လေသည်
ကောင်းလိုက်တာ ဒေါက်တာရယ် လက်ရဲ့အရသာနဲ့ လီးရဲ့အရသာ ကွာတယ်ဆိုတာ
ခုမှပဲသိတော့တယ် ခိ ခိ
လက်တွေက အလိုလိုခင်နှင်းရဲ့အဖုတ်လေးပေါ်မှာ အထက်အောက်ပွတ်ပေးနေတော့ နပ်စ်မလေးခင်နှင်းခမျာ တိုးညှင်းတဲ့ညည်းသံနဲ့အတူ ခါးတွေပါကော့သွားလေရဲ့ သက်ငြိမ်လည်း စိတ်ကထန်လာပြီမို့ ပုဆိုးကိုဖြည်ချလိုက်ရာ ထောင်မတ်နေတဲ့လီးကြီးက လှုပ်ရမ်းကာမာန်ဖီနေတော့သည် ဒါကိုပွင့်လင်းရဲတင်းလှတဲ့ နပ်စ်မလေးခင်နှင်းကမြင်တော့ အို ဒေါက်တာ့ဟာကြီးက အကြီးကြီးဘဲ
ဒေါက်တာသက်ငြိမ်ရဲ့ ထောင်မတ်နေတဲ့ လိင်တံကြီးကို နပ်စ်မလေးက လက်နဲ့ကိုင်ကြည့်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် ဂွင်းထုပေးနေလေရာ အိုး အားး ဆိုတဲ့ဖီးအပြည့်နဲ့ သက်ငြိမ်ရဲ့ညည်းညူသံထွက်လာလေသည်
အသွင်းအထုတ် မှန်မှန်လုပ် လိုးပေးနေရာ နပ်စ်မလေးခင်နှင်းခမျာ ဖီးတွေတက်လာပြီး အောက်ကနေ
**အား.. အ ..အိုး.. အင့် **
သက်ငြိမ်လည်း ခင်နှင်းရဲ့နို့အုံတွေကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆုပ်နယ်ရင်း ခပ်မြန်မြန်လေးဆောင့်လိုးပေးနေလေရာ ဒေါက်တာမြန်မြန်လေးဆောင့်ပေး ခင်နှင်းပြီးခါနီးနေပြီ
လက်ရဲ့အရသာနဲ့ လီးရဲ့အရသာ ကွာတယ်ဆိုတာ ခုမှပဲသိတော့တယ် ခခ်…. ခခ်
ဒီနေ့ ဆေးခန်းနဲ့ ငါးမိုင်လောက်ဝေးတဲ့ ရွာလေးကလူနာတွေဆေးကုပေပြီး မိုဒေါက်တာသက်ငြိမ်ပြန်လာခဲ့ရာ…မိုးချုပ်စပင်ရှိနေလေပြီ
ကျန်းမာရေးမှူးနဲ့နပ်စ်မလေခင်နှင်းကတော့ မွေးလူနာတယောက်ရှိ၍ ထိုရွာလေးမှာပင် ညအိပ်ကျန်ခဲ့လေသည် ဒေါက်တာသက်ငြိမ်လည်းရေချိုးထမင်းစား၍ အနားယူကာဟိုနေ့ကနပ်စ်မလေးနဲ့အဖြစ်အပျက်ကို ပြန်စဉ်းစားရင်း ငါ ဒီလိုအခွင့်အရေးယူခဲ့တာ မှားသွားလား……… ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်သုံးသပ်နေလေသည်
အမှန်တော့သက်ငြိမ် ခင်နှင်းအပေါ် အရင်ကမရိုးသားတဲ့စိတ် မရှိခဲ့တာအမှန်ပါ
သက်ငြိမ်စိတ်ဝင်စားနေတာက ကျောင်းဆရာမလေးစိမ်းလဲ့ညိုဖြစ်သည် စ ရောက်စကတည်းက စိတ်ဝင်စားနေခဲ့ပြီး ဟိုဘက်နေ့က ရေချိုးတဲ့နေရာမှာ
စိမ်းလဲ့ညိုရဲ့ဖွံ့ထွားလှတဲ့ ရွှေရင်အစုံကို မြင်တွေ့ရတော့ ပိုပြီးရင်ခုန်နေလိုလို
အိမ်အောက်ခပ်လှမ်းလှမ်းက အိမ်သာဆီသို့ အပေါ့သွားခဲ့ပြီး အိမ်ပေါ်ပြန်တက်ရန်အလုပ်မှာ
အိမ်အောက်ထပ်က ကျောင်းဆရာမလေးအခန်းထဲမှ ညည်းသံလိုလို အသံကို ကြားမိလာလေသည်
ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ သူကြီးအိမ်ကလည်း မီရောင်မမြင်တော့ အိပ်ကြပြီထင်တယ် ဒါဆိုခုန အသံက ကျောင်းဆရာမလေးစိမ်းလဲ့ညိုအခန်းက ဖြစ်မယ် နပ်စ်မလေးကလည်း ဟိုဘက်ရွာရောက်နေတော့ စိမ်းလဲ့ညိုတယောက်တည်းပေါ့
ခဏနေတော့ ခြေသံကြားလိုက်ပြီး အခန်းတံခါးလာဖွင့်ပေးတဲ့ ကျောင်းဆရာမလေးစိမ်းလဲ့ညို ဆရာမ ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတော့ ဒေါက်တာ ကျမ မိုးချုပ်မှခေါင်းလျှော်ရေချိုးလိုက်တာ ဖျားပြီထင်တယ်
သြော် ဆရာမရယ် ကျွန်တော့ကိုလာခေါ်ရောပေါ့
ညည့်နက်နေပြီဆိုတော့ ဒေါက်တာ့ကို အားနာလို့ပါ
ဟာ မဟုတ်တာ ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေက လူနာတွေအတွက် နေရာမရွေးအချိန်မရွေးပါဘူးဆရာမရယ်
ဟုတ် ကျေးဇူးပါဒေါက်တာ ရပါတယ်ဗျာ ခဏနော်
ဆေးအိပ်ယူပြီးပြန်လာတော့ ကျောင်းဆရာမလေးစိမ်းလဲ့ညိုက ညဝတ်အင်္ကျီပါးပါးလေးနဲ့ ကုတင်ပေါ်ခြေထောက်နှစ်ချောင်းအောက်ချပြီး ထိုင်နေလေရာ ဒေါက်တာသက်ငြိမ်က ဆေးအိတ်ကို ဘေးကခုံပေါ်ချလိုက်ပြီး စိမ်းလဲ့ညိုရဲ့နဖူးကို စမ်းကြည့်လေသည်
ကိုယ်တော့ နဲနဲပူနေတယ် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းကြည့်မယ်
အမှန်တော့ စိမ်းလဲ့ညိုတယောက် ခုနကဖျားသလိုရှိခဲ့ပေမယ့် ကိုယ်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဒေါက်တာသက်ငြိမ်နဲ့ ညည့်နက်သန်းခေါင် တခန်းတည်းမှာနှစ်ယောက်တည်းရှိနေတော့ ဖျားနေတာတွေမရှိတော့ဘဲ ရင်တွေဘဲခုန်နေမိ
သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းပြီး ကျွန်တော်ဆေးထိုးပေးခဲ့မယ်ဟုဆိုကာ ဆေးထိုးပြွန်မှာဆေးစပ်နေလေသည်
ဒေါက်တာသက်ငြိမ်က မိမိဝင်လာကတည်းက ကျောင်းဆရာမလေး စိမ်းလဲ့ညို ညဝတ်ဂါဝန်ကိုဝတ်ထားတာ မြင်ပြီးသား ဆေးစပ်နေကတည်းက ဆရာမလေးရဲ့အပေါ်ပိုင်းကို မြင်ပြီးနောက်ပိုက်မှာ အောက်ပိုင်းဆို ပိုလှမယ်လို့တွေးနေခဲ့ပြီး ဒီတခါအခွင့်အရေးပဲလို့စိတ်ကူးကာ စိတ်တွေမရိုးမရွဖြစ်နေလေသည်
ဆေးထိုးအပ်ကို ဂါဝန်ပေါ်က စိုက်လို့ရနိုင်ပေမယ့်
အို ရှက်သွေးဖျာနေတဲ့ ကျောင်းဆရာမလေးစိမ်းလဲ့ညို
စိမ်းလဲ့ညိုလည်း မထူးပါဘူးဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ဂါဝန်ကို ဒေါက်တာဘက်မျက်နှာမူ အနေအထားနဲ့အောက်ကနေ အပေါ်ဖက် စ လှန်နေရာ ခြေသလုံးနဲ့ပေါင်လုံးတုတ်တုတ်ဖွေးဖွေးတွေကို မြက်လိုက်ရတဲ့ဒေါက်တာသက်ငြိမ်တယောက် ဆေးထိုးအပ်ကိုင်နေရင်း ရင်တုန်နေကာ တံတွေးတွေမျိုချမိနေတော့သည်
စိမ်းလဲ့ညိုလည်း ရှက်တဝက် ရင်ခုန်တဝက်နဲ့ ဂါဝန်ကိုလှန်တင်ထားရာ တင်ပါးထိမရောက်နိုင်သေးဘဲ ပေါင်ရင်းထိသာ လှန်ထားမိလေသည်
ဒေါက်တာသက်ငြိမ်က ရှေ့နားတိုးလာကာ စိမ်းလဲ့ညိုရဲ့ညဝတ်ဂါဝန်လေးကို ခါးအထိဆွဲလှန်လိုက်လေသည်
ကျောင်းဆရာမလေးစိမ်းလဲ့ညိုတယောက် မျက်စိစုံမှိတ်ကာ ရှက်သွေးဖျာနေတော့သည်
ဟာ ဒေါက်တာသက်ငြိမ်မှာလည်း ခါးအထိလှန်လိုက်တော့ ဘေးတစောင်းအနေအထား စိမ်းလဲ့ညိုရဲ့ တင်သားအကြီးကြီးတွေရယ်
မိမိနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အနေအထားကြောင့်ပေါင်နှစ်ဖက်အထက်အောက်ပူးထားပေမယ့် စိမ်းလဲ့ညိုရဲ့အဖုတ်လေးကိုမမြင်ရပေမယ့်ဆီးခုံအောက်ကအမွှေးနက်နက်လေးတွေကို မြင်ပြီး လက်တွေတုန်နေလေတော့သည်
ဆ ..ဆရာမ .. ဟိုဖက်လှည့်ပေးပါလား
စိမ်းလဲ့ညိုလည်း ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်းမသိပဲ ရင်တွေသာခုန်နေတော့သည်
ဘေးစောင်းအနေအထားနဲ့ ဟိုဘက်အလှည့်မှာ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ခပ်ဟဟ ကားလိုက်သလိုဖြစ်သွားပြီး အမွေးနက်နက်တွေဖုံးထားတဲ့ အဖုတ်လေးကို လျက်တပြတ်ဖွင့်ဟ သွားသလိုဖြစ်ကာ
ဒေါက်တာသက်ငြိမ်စိတ်ရိုင်းတွေဝင်လာပြီး ဆေးထိုးလို့ပြီးသွားတဲ့ ကျောင်းဆရာမလေး စိမ်းလဲ့ညိုရဲ့တင်ပါးလုံးလုံးကြီးကို လက်ဖဝါးနဲ့ပွတ်ပေးနေပြန်သည်
အစကတော့ လက်ဝါးနဲ့ဖိပွတ်နေပြီးနောက်မှာတော့ ဖွဖွလေးဆက်ပွတ်ပေးနေတော့
ဒါပေမယ့်မ မိမိရဲ့ သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းတဲ့အနေနဲ့ ဂါဝန်ကိုခြေဖျားထိပြန်ဖုံးပြီး ထထိုင်လိုက်တယ်
သက်ငြိမ်ကတော့ ဆရာမလေးရဲ့သဘာဝအလှအပတွေကို မျက်မြင်ခံစားခဲ့ရပြီး အပြည့်အဝ ချစ်ပွဲတွေ ဆင်နွှဲချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ တားမရ ဆီးမရဖြစ်နေခဲ့တယ်
ခြေနှစ်ဖက်ချပြီး တင်ပါးလေးလွှဲထိုင်နေတဲ့ စိမ်းလဲ့ညိုမျက်နှာလေးကို ဆွဲယူပြီးနှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းလိုက်တယ် ရုတ်တရက်ဆိုတော့ ကျောင်းဆရာမလေး စိမ်းလည်းညိုလည်း ရှောင်ဖို့အချိန်မရလိုက်ဘဲ သက်ငြိမ်ရဲ့အနမ်းတွေမှာ တဒင်္ဂမိန်းမောနေမိတာ
ထို့နောက် သက်ငြိမ်ရဲ့လက်တွေက စိမ်းလဲ့ညိုရဲ့ နို့အုံတွေပေါ်မှာ ပွတ်သပ်ဆုပ်နယ်ရင်း အနမ်းမိုးတွေစွေလို့နေတော့တယ်
ဒေါက်တာသက်ငြိမ်က ဆရာမလေးစိမ်းလဲ့ညိုရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲယူရင်း မိမိပေါင်ကြားထဲမှာ ထောင်မတ်ထိုးထွက်လာတဲ့ လီးကြီးပေါ် အုပ်ကိုင်စေလိုက်တဲ့အခါမှာတော့
အို ပူနွေးမာထောင်နေတဲ့ ဒေါက်တာရဲ့လိင်တံကြီးကို အမိအရစမ်းမိလိုက်တဲ့ အပျိုရိုင်းလေး စိမ်းလဲ့ညိုတယောက် အသိစိတ်တွေပြန်ဝင်လာရင်း သက်ငြိမ်ရင်ဘတ်ကို တွန်းလွှတ်လိုက်ကာ
ဟင့်အင်း ဒေါက်တာ အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ တောင်းပန်ပါတယ်´´ သက်ငြိမ်လည်း စားရခါနီးမှ ငတ်ရဆိုသလို အပျိုရိုင်းလေး စိမ်းလဲ့ညိုက လက်မခံဘဲ ငြင်းဆန်နေတော့လည်း မတတ်သာပဲ လက်လျှော့ရလေသည် ဆောရီးပါ..ဆရာမရယ်..´´
ကျွန်တော်စိတ်လွတ်သွားတယ် ´´...ဒါပေမယ့် ဆရာမကို မြင်ကတည်းက စွဲစွဲလန်းလန်း စိတ်ဝင်စားခဲ့တာပါ´´
ဒါဆိုလည်း ကျနော်အခန်းပြန်တော့မယ် ဆေးထိုးထားတာဆိုတော့ နေကောင်းသွားမှာပါ´´ ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါ ဒေါက်တာ´´
သက်ငြိမ်းလည်း သက်ပြင်းချကာ ဆေးအိတ်ကို ဆွဲယူပြီး
ကျောင်းဆရာမလေး စိမ်းလဲ့ညိုအခန်းက ထွက်ခဲ့လေသည်
ဒေါက်တာသက်ငြိမ်ထွက်သွားတော့ စိမ်းလဲ့ညိုတယောက် ရင်ထဲမှာ ဟာသလိုဖြစ်သွားခဲ့ပြီး
ခုန ဒေါက်တာရဲ့အပြုအစု အယုယတွေကို ပြန်တွေးမိရင်း ရင်ခုန်သလိုလို မိမိအဖုတ်လေးက ယားလာသလိုလိုဖြစ်နေပြီး လက်နဲ့စမ်းကြည့်တော့ အဖုတ်ဝမှာ အရည်လေးတွေ စို့နေတာ
စိမ်းလဲ့ညိုလည်း ကိုင်ကြည့်ရင်းနဲ့ မထူးပါဘူးဆိုပြီး အမွေးတွေဖုံးအုပ်ထားတဲ့ အစိလေးကို ပွတ်ရင်းနဲ့ မျက်လုံးတွေစင်းပြီး
တစ်ခုခုကို လိုလားတောင့်တသလို ဖြစ်မိလာတယ်
လက်တဖက်က မိမိရဲ့အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားနဲ့အစိလေးကိုပွတ်ပြီး ကျန်လက်တဖက်နဲ့ နို့အုံတွေကို ဆုပ်ကိုင်ပွတ်သတ်ရင်း တိုးညှင်းစွာ ညည်းတွားနေမိတယ်
ဒေါက်တာသက်ငြိမ်လည်း အခန်းထဲပြန်ရောက်မှ ဆရာမလေးစိမ်းလဲ့ညိုကို သောက်ဆေးပေးခဲ့ဖို့ အခုမှသတိရကာ သောက်ရမည့်ဆေးတွေကို ရွေးယူခဲ့ပြီး စိမ်းလဲ့ညိုရဲ့ အခန်းတံခါးရှေ့ရောက်လာခဲ့တယ်
တံခါးခေါက်ဖို့ လက်ရွယ်လိုက်တော့ အခန်းတံခါးက မိမိထွက်လာကတည်းက စေ့ထားတဲ့အတိုင်းသာ ရှိနေသေးတယ် စိမ်းလဲ့ညိုလည်း ရှက်စိတ်တွေနဲ့ ထူပူပြီး အခန်းတံခါးမပိတ်မိတာဖြစ်လောက်မယ်ဆိုပြီး
နဲနဲလေး ဟ နေတဲ့တံခါးကြားက မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကြောင့် ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်
စိမ်းလဲ့ညိုတယောက် ကုတင်အထက်မှာ ညဝတ်ဂါဝန်လေးကို ရင်ဘတ်အထိ ပင့်တင်ပြီး လက်တဖက်က နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ပွတ်ချေနေပြီး ကျန်လက်တဖက်က သူမရဲ့အဖုတ်လေးကို ပွတ်နေကာ မျက်လုံးတွေမှိတ်ထားနေတော့သည်
ဒေါက်တာသက်ငြိမ် အခန်းတံခါးကို အသံမြည်အောင် တွန်းဖွင့်ကာ အခန်းထဲဝင်လိုက်တော့
အို ရုတ်တရက် စိမ်းလဲ့ညိုတယောက် ထိတ်လန့်သွားခဲ့ပြီး အခန်းတံခါးမပိတ်ရသေးတဲ့အဖြစ်ကို ခုမှပြန်အမှတ်ရလေသည်
ဂါဝန်ကို ချက်ချင်း ဒူးအောက်ထိ ကပျာကယာဆွဲချလိုက်ပြီး
ဒေါက် ဒေါက်တာ ဘယ်အချိန်ကတည်းက ...´´ ဟို ကျွန်တော်လည်း စိမ်းလဲ့ညိုအတွက် သောက်ဆေးတွေကျန်နေခဲ့လို့ လာပို့တာပါ´´
သြော် ဟုတ်ကဲ့ ဒေါက်တာ ဒါနဲ့ ခုနမြင်ခဲ့တာတွေကို ဒေါက်တာ့ရင်ထဲမှာဘဲ ထားပါနော်´´ ဆရာမရယ်´´
ဆိုပြီး သက်ငြိမ်လက်တွေက စိမ်းလဲ့ညိုရဲ့ခါးသိမ်သိမ်လေးကို ရောက်နေတာလဲလှမ်းဖက်လိုက်ရာ စိမ်းလဲ့ညိုလည်း သက်ငြိမ်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲ အလိုက်သင့်
စိမ်းလဲ့ညိုကို စွဲစွဲလမ်းလမ်း ချစ်နေမိပြီဗျာ ´´ ပြောပြောဆိုဆို.......ကျွန်တော်လေ´´
သက်ငြိမ်ကစိမ်းလဲ့ညိုရဲ့နှုတ်ခမ်းအစုံကို တက်မက်စွာ အနမ်းမိုးတွေရွာချပစ်ခဲ့တာ
ဒီတခါတော့ ရင်ဘတ်ချင်းနီးစပ်နေ၍ စိမ်းလဲ့ညိုလည်း ပြန်မရုန်းထွက်မိတော့ ဒေါက်တာသက်ငြိမ်ရဲ့အနမ်းတွေမှာ စီးမျောရင်း မိမိရဲ့လျှာလေးကို သက်ငြိမ်ရဲ့လျှာနဲ့ထိတွေ့စေကာ လက်ခံကြောင်း သက်သေပြလိုက်မိတော့သည်
လက်တွေကလည်း ဇယ်ဆက်သလိုစိမ်းလဲ့ညိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအထက်အောက်လှုပ်ရှားနေတော့ကာ စိမ်းလဲ့ညိုတယောက် တီကောင်ဆားနဲ့တို့မိသလို ထွန့်ထွန့်လူးလာကာ သက်ငြိမ်ရဲ့ လည်ပင်းကို သိုင်းဖက်ထားရင်း ချိုမြိန်တဲ့အနမ်းတွေ ဖန်တီးနေလေတော့သည်
ဆက်တိုက်ဆိုသလို သက်ငြိမ်က မိမိဂါဝန်ကို သူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ချွတ်ချလိုက်ပြီး သူ့ရဲ့ပုဆိုးကိုလည်း
ကွင်းလုံးပုံချွတ်ချလိုက်ရာ ပူနွေးနွေးအရာတစ်ခုက စိမ်းလဲ့ညိုရဲ့ဝမ်းဗိုက်ကို လာထောက်မိသလို ဖြစ်၍ လက်နဲ့စမ်းကြည့်ရာ
တုတ်ခိုင်ထောင်မတ်နေတဲ့ သက်ငြိမ်ရဲ့ လီးကြီး
ရင်ထဲ ထိတ်လန့်မှုဖြစ်ပေါ်ပေမယ့်လည်း မိမိလက်က သက်ငြိမ်ရဲ့ လိင်တံကြီးကိုဆုပ်ကိုင်ထားမိနေဆဲ
သက်ငြိမ်က သူမဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့လက်အပေါ်မှ သူ့၏လက်နှင့် ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်စေလေသည်
စိမ်းလဲ့ညိုလည်း သက်ငြိမ်က သူမရဲ့နို့တွေကို အငမ်းမရ စို့ပေးနေတာ့ သူမရဲ့လက်ကလည်း အလိုလို သက်ငြိမ်ရဲ့ လီးတံကြီးကို ဂွင်းတိုက်သလို ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ပေးနေတော့သည်
အင်း အား ဟင်း
နှစ်ဦးစလုံးမှ ကာမအရသာ ခံစားနေမိပြီး ပြိုင်တူ ညည်းသံတွေ ထွက်နေမိတော့သည်
သက်ငြိမ်က စိမ်းလဲ့ညိုရဲ့ ကိုယ်လေးကို ကုတင်ပေါ်ပက်လက်လှန်စေကာ ပေါင်နှစ်လုံးကို ကားစေလိုက်ရာ
စိမ်းလဲ့ညိုလည်း ရှက်ရှက်နှင့် ပေါင်နှစ်လုံးကိုပြန်စုလေသည် မျက်လုံးတွေကိုတော့ ခုထိမှိတ်ထားပြီး ရင်တွေလှိုက်ဖိုကာ လှစ်ဟာနေတော့သည်
သက်ငြိမ်က မရမက စိမ်းလဲ့ညိုရဲ့ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ဆွဲကားလိုက်ပြီး တခဏ
စိမ်းလဲ့ညိုရဲ့အဖုတ်လေးမှာ နူးညံ့ စိုစွတ်တဲ့ထိတွေ့မှု တခုခံစားမိလို မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်မိတော့
“အို ..ဒေါက် .. ဒေါက်တာ .. အ.. အားး´´
ဒေါက်တာသက်ငြိမ်ရဲ့ဦးခေါင်းက မိမ်ိပေါင်ကြားထဲ ရောက်နေပြီး မိမိရဲ့အဖုတ်တစ်ခုလုံးကို လျှာနဲ့အထက်အောက် လျက်ပေးနေတာ
စိမ်းလဲ့ညို တားချိန်တောင်မရလိုက်ဘဲ ခံစားမှုသာ အထွတ်အထိတ်ရောက်နေကာ သက်ငြိမ်ရဲ့ ဆံပင်တွေကို ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး ခါးလေးကော့ကော့သွားလေသည်
အင်း …ဟင်း ….ဟင်း
ရုတ်တရက် ဒေါက်တာသက်ငြိမ်ကထလာပြီး စိမ်းလဲ့ညိုရဲ့မျက်နှာအနီး သူရဲ့လီးကြီးကို ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်နေရင်း
ဆရာမ ကျွန်တော့်လီးကို စုပ်ပေးပါလား
စိမ်းလဲ့ညိုလည်း ကာမစိတ်အထွတ်အထိပ်ရောက်နေပြီဆိုတော့ကာရှက်စိတ်တွေပျောက်ကွယ်ခဲ့ပြီး သက်ငြိမ်ရဲ့ထောင်မတ်နေတဲ့ လီးကြီးကိုကြည့်ကာ လက်ချောင်းတွေနှင့် ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး သူမရဲ့နှုတ်ခမ်းဝမှာ တေ့လိုက်လေသည်
စိမ်းလဲ့ညိုရဲ့ နှင်းဆီလွှာ နှုတ်ခမ်းတွေက ပွင့်ဟသွားခဲ့ပြီး
ဆရာမ လိုးကြရအောင်ဗျာ စိမ်းလဲ့ညိုကို အရမ်းလိုးချင်နေပြီ
စိမ်းလဲ့ညိုကမိမိဆန္ဒတွေကလည်းလိုလားတောင့်တနေပြီဖြစ်ရာ အိပ်ရာပေါ် ပက်လက်လှန်ပေါင်ကားပေးနေလိုက်တော့သည်
ဒေါက်တာသက်ငြိမ်က သူမ၏ပေါင်ကြားတွင်ဒူးထောက်နေရာယူကာ သူ၏လီးကြီးကို စိမ်းလဲ့ညိုရဲ့အဖုတ်ဝမှာ ဖြည်းညှင်းစွာ ထောက်လိုက်လေသည်
စိမ်းလဲ့ညိုနှုတ်မှ အနည်းငယ်နာကျင်မှုရှိ၍ ညည်းတွားသံတခဏသာထွက်ခဲ့ပြီး နောက်မှာတော့
ဒေါက်တာသက်ငြိမ်ရဲ့ အသွင်းအထုတ် ညင်သာမှုနဲ့
စိမ်းလဲ့ညိုရဲ့အဖုတ်မှ ကာမစိတ်ကြောင့်ထွက်လာတဲ့ အရည်လေးတွေကြောင့် နှစ်ဦးစလုံး နာကျင်မှုမရှိတော့ပဲ စည်းစိမ်ရနေကြလေပြီ
အား …..အား…. အင့် ….ဟင်း
ခံစားမှုအထွတ်အထိပ်ရောက်၍ ညည်းတွားသံများနှင့်အတူ ဒေါက်တာသက်ငြိမ်နှင့် စိမ်းလဲ့ညိုတို့ရဲ့ ချစ်ပွဲဝင်ခန်းလေးမှာ
နွှဲရင်း နွှဲရင်း မိုးလင်းခဲ့လေတော့သည်။